चल र सञ्चालनकर्ताहरू बीचको परिभाषा
रेखाहरू बीचमा स्पेसिङ निर्धारित गर्दछ
मुळ चिन्ह र रेडिकल्स बीचको स्पेसिङ निर्धारित गर्दछ.
सुपरस्क्रिप्ट अनुक्रमणिकाहरूका लागि स्पेसिङ निर्धारण गर्दछ.
सबस्क्रिप्ट अनुक्रमणिकाहरूका लागि स्पेसिङ निर्धारण गर्दछ.
फ्र्याक्सन पट्टी र न्युमरेटर बीचको स्पेसिङ निर्धारित गर्दछ.
फ्र्याक्सन पट्टी र डिनोमिनेटर बीचको स्पेसिङ निर्धारण गर्दछ.
फ्र्याक्सन पङ्क्तिको लम्बाइ विस्तार निर्धारित गर्नुहोस्
फ्र्याक्सन पङ्क्तिको तौल निर्धारिर गर्दछ.
योगफल प्रतीक र माथिल्लो सीमा बीचको स्पेसिङ निर्धारण गर्दछ.
योगफल प्रतीक र तल्लो सीमा बीचको स्पेसिङ निर्धारण गर्दछ.
कोष्ठकहरूको माथिल्लो अन्त्य र सामाग्रीको माथिल्लो कुना बीचको ठाडो दूरी निर्धारित गर्दछ .
सामाग्रीहरू र कोष्ठकको माथिल्लो अन्त्य बीचको तेर्सो दूरी निर्धारित गर्दछ.
प्रतिशत अधिक साइज समायोजन गर्नुहोस्.० प्रतिशतमा कोष्ठकहरू सेट हुन्छ जुन तिनीहरूले तर्क समान उचाइमा घेर्दछ. उच्च प्रविष्ट मान, लामो ठाडो खाली भाग कोष्ठकहरूको सामाग्रीहरू र कोष्ठकहरूको बाह्य किनाराको बीचमा. फाँट मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ सबै कोष्ठकहरू समिश्रण गर्नुहोस् सँग
पङ्क्तिको म्याट्रिक्स तत्वहरू बीचको स्पेसिङ निर्धारित गर्दछ.
स्तम्भमा म्याट्रिक्स तत्वहरू बीचको स्पेसिङ निर्धारित गर्दछ.
आधाररेखा सँग सम्बन्धित प्रतीकहरूको उचाइ परिभाषित गर्दछ.
प्रतीक र चल बीचको न्युनतम दूरी निर्धारित गर्दछ.
सञ्चालनकर्ताको माथिल्लो कुनामा चलबाटको उचाइ निर्धारित गर्दछ.
सञ्चालनकर्ता र चलहरू बीचको दूरी निर्धारण गर्दछ
बायाँ किनारा सूत्र र पृष्ठभूमिको बीचमा राखिएको छ.
दायाँ किनारा सूत्र र पृष्ठभूमिको बीचमा राखिएको छ.
माथिल्लो किनारा सूत्र र पृष्ठभूमिको बीचमा राखिएको छ.
तल्लो किनारा सूत्र र पृष्ठभूमिको बीचमा राखिएको छ.